Mpanamboatra horonantsary miatrika filalaovana vita amin'ny horonantsary sy filomanosana mahafinaritra- Roc
FOMBA FIOMPIANA Varotra
PLYWOOD MIJARIANA FILM
Ny famokarana karazan-kazo isan-karazany dia 1.000.000m3 isan-taona. Manolo-tena amin'ny famokarana sy fanondranana vokatra avo lenta avo lenta indrindra amin'ny sarimihetsika vita amin'ny tabilao, gitara mahafinaritra, trondro antiskid, MDF, OSB ary vokatra LVL.
Amin'ny maha-mpanamboatra sy whsaler of plywood, MDF, OSB ary LVL anay, dia manolo-tena ho lohalaharana amin'ny teknolojia sy ny kalitao izahay. fanatsarana hatrany ny faritra rehetra eo amin'ny tontonana hazo. Ny famatsiana milamina dia manampy anao hanana toerana matanjaka eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ary miantoka fitomboana maharitra.
MPANORATANA FITAOVANA NY FANORENANA AN-DALANA SY NY MIRINERIANA
Serivisy Agent Sourcing ROCPLEX
Mbola manahy ny amin'ny fitaovam-pananganana loharanon-karena avy any Shina? Avy eo dia safidy tsara ho anao ny mifidiananao anay. Mampiavaka azy amin'ny serivisy fampindramam-bola iray, ROCPLEX dia ahafahanao mivoaka avy any Shina amin'ny fomba tsy ampoizina nefa mahatalanjona.
Ireto ambany ireto ny BENEFITS azonao ankafizina…
Sampan-draharaha mividy tsara sy sampana fanaraha-maso kalitao ary mazava ho azy, mpivarotra matihanina. Ka ny ROCPLEX dia manana fahatokisana ampy ho departemanta mividy any ivelany azo antoka. 25 taona raharaham-pianakaviana hazo dia avelao isika hanana fahatokisan-tena hanao asa tsara amin'ny fananganana orinasa mpividy vokatra.
ROC International, orinasa mpanafatra sy manondrana azo antoka, manana traikefa mandritra ny 25 taona amin'ny serivisy fanondranana sy fanondranana. Matihanina ROC iraisam-pirenena amin'ny vokatra hazo, indrindra amin'ny orinasa tontonana hazo. 25 taona ny fanamboarana sy fanondranana tontonana hazo dia nanamboatra ekipa matihanina amin'ny vokatra hazo fanafarana sy fanondranana ary fanaraha-maso kalitao.
Orinasa manafatra sy manondrana kilasy amin'ny fadin-tseranana, miaraka amin'ny hafainganana sy fahaizan'ny fahazoan-dàlana tsara, ekipa miasa matanjaka sy matotra, manome anao serivisy fanondranana sy fanondranana tena tsara sy eritreritra.
Home World Group no mpanamboatra lehibe indrindra sy mpanondrana plywood ary vokatra mifandraika amin'izany any Shina, izay natsangana tamin'ny taona 1993 niaraka tamin'ny sampana miisa 6. Ankehitriny izahay dia mankafy andiam-pamokarana 73 amin'ny filalaovana filalaovana plywood sy LVL. Ary orinasa mpiorina 12 ao amin'ny OSB, MDF ary ny birao melamine.
ROC International dia orinasam-panompoana import sy export ao amin'ny Home World Group.
Ny famokarana karazan-kazo isan-karazany dia 1.000.000m3 isan-taona. Miaraka amina milina mandroso maro, sander Italiana IMEAS, milina fanodinana UROKO Japoney, Veneer Joint Tenderizers ary milina maina lehibe, ny orinasa dia manolo-tena hamokatra sy hanondrana ireo vokatra avo lenta avo lenta indrindra amin'ny sarimihetsika vita amin'ny tabilao, gitara mahafinaritra, trondro antiskid, MDF, OSB ary ny vokatra LVL.
Maninona no tsara kokoa ny fizahana ROCPLEX
Manana ekipa mpandinika kalitao matihanina amin'ny fitaovana vita amin'ny hazo izahay.
Fanandramana fanodinana sy fanaraha-maso 25 taona amin'ny trondro, MDF, OSB, birao melamine, vokatra LVL.
100% Rariny, matihanina ary henjana.
100% Mpanadihady matihanina.
manarona ireo faritra indostrialy ao Shina.
Manome serivisy tsara indrindra izahay.
Mamoaka ny tatitra fanaraha-maso ao anatin'ny 12 ora aorian'ny fizahana.
Manana ny vidiny tsara indrindra izahay.